Apple inopindura madonhwe ekugona kuita eMacBook Pro nyowani ya2018 | Ndinobva mac
Pave nevhiki kubva iyo Youtuber Dave Lee, akataura kuti maererano nezviito zvekutanga ne iyo 2018 MacBook Pro ine Intel i9 processor uye matanhatu macores, aive nedambudziko rinopisa iro raidzora mashandiro ake. Izvi zvaive pazasi peiyo pakarepo yapfuura modhi.
Apple inokurumidza kushanda kuti ione dambudziko. Mune bvunzo dzaJune 2018 pakanga pasina matambudziko, nguva pfupi isati yatanga iyo MacBook Pro nyowani ine i9 processor. Chikumbiro chekutanga chaApple chave chekuburitsa chinowirirana chinogadziridza ku macOS High Sierra 10.13.6.
Iyo MacRumors webhusaiti yakagamuchira chirevo kubva kune mutauri weApple.
Mushure mekuyedza kwakawanda kuita pasi pekuwanda kwemabasa, taona kuti pane chisipo chedhijitari kiyi mune iyo firmware iyo inokanganisa iyo yekushisa manejimendi system uye inogona kudzora kumhanya kweprosesa, pasi pemasimba akasimba ekupisa muMacBook Pro nyowani.
Kugadziriswa kwebug kunosanganisirwa mune macOS Yakakwira Sierra 10.13.6 yekuwedzera Yekuvandudza nhasi uye zvinokurudzirwa kuiisa. Tinokumbira ruregerero kune vese vatengi vakaita zvisirizvo pamidziyo yavo mitsva
Vatengi vanogona kutarisira izvozvo Iyo nyowani 15-inch MacBook Pro inosvika ku70% nekukurumidza, uye iyo 13-inch MacBook Pro ine Kubata Bar iri kusvika ku2x nekukurumidza, sezvakaratidzwa mumhedzisiro yekuita pawebhusaiti yedu.
Iyo YouTuber yakawana kuti kupa 5k vhidhiyo neiyo nyowani 15-inch MacBook Pro neIntel i9 yaive kusvika ku10% zvishoma zvishoma pane yake yapfuura chizvarwa Mac. Izvi zvakakonzera vashandisi vazhinji kudzima maodha avo.
Zvinoenderana nezvakataurwa naApple, dambudziko rinogadziriswa neyakagadziriswa nyowani yezvikwata zve2018. Sezviri pachena haisi kungobata chete komputa iyi, asi mamwe MacBook Pros ya2018, ese ari gumi nemashanu uye gumi nematanhatu masendimita, i15 uye i13 processor.
Apple inotaura kuti yakabatana neYoutuber kuti idzokorore kufambiswa kwebasa kwayanga yakachengeta, kuitira kuti uone kudonha kwekuita kwekutanga-ruoko uye kugadzirisa dambudziko kuburikidza nesoftware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inopindura inogona kuita madonhwe eiyo nyowani 2018 MacBook Pros
Unboxing vhidhiyo yesleather sleeve yeMacBook Pro